Any Shina, Miaritra Fandòrana Amin’ny Herinaratra Ireo Miankindoha Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2018 5:17 GMT
(Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2009)
Nanao fanadihadiana momba ireo toeram-pitsaboana miompana amin'ny fitsaboana ny fiankinandoha amin'ny aterineto any Shina ny mpanao gazety iray avy amin'ny 21st Century Business Herald, Guo Jianloong (郭建龍) . Nosivanin'ny lehibeny ny ampahany amin'ny lahatsorany, ka navoakany tao amin'ny bilaoginy [amin'ny teny shinoa].
Abaribariny ao amin'ny lahatsorany ny fomba fanao tsy mifanaraka amin'ny maha-olona ampiharin'ny toeram-pitsaboana iray natokana hitsaboana ny fiankinandoha amin'ny aterineto, ny ” foibe shinoa mitsabo ireo miankindoha amin'ny aterineto “, any Shandong Lin-yi (臨沂 izay tarihin'i Yeung Yongxin（楊永信. Nanetsika ireo ray aman-deny mba hitory an'i Yeung i Guo rehefa nahita ilay fomba fanao ao amin'ny toeram-pitsaboana. Fa inona no zava-nisy tao amin'io toeram-pitsaboana io ?
Araka ny lahatsoratry ny Guo dia nankany amin'io foiben-toerana io izy ny 21 aprily mba hilaza amin-dry zareo fa miankindoha amin'ny aterineto ny rahalahiny. Tamin'ny fanaovana izany, no nahafantarany fa hidiana an-kery anaty efitrano ireo ankizy ary dorana amin'ny herinaratra.
Hazavain'ilay mpanao gazety amintsika fa lasa fivangongoanà tombontsoa ny fitsaboana ny fiankinandoha amin'ny aterineto any Shina. Eny an-tampony no misy ireo vondrona manam-pahaizana izay mamaritra io fiankinan-doha io ho tahaka ny aretin-tsaina. Mahafinaritra ny ray aman-dreny tsy mahay manabe ny zanany io karazana fanazavàna psikiatrika io ary ny fomba filazàn'ireo manampahaizana dia ahafahan-dry zareo miala mora amin'izany. Resa-bola no tena manosika ireo manampahaizana ireo, mazava ho azy. Ny iray fotsiny amin'ireo toeram-pitsaboana ireo dia mety mahazo yuan an-tapitrisany maro isantaona nefa ny ankizy dia ho voadona sy ho saro-tahotra mandakizay.
Tantaran'i Teng Fei, tanora tovolahy 17 taona, no velabelariny ao amin'ny lahatsorany. Tamin'ny aprily 2008, dia niangavian'ny rainy izy hiaraka aminy ho any amin'ilay toeram-pitsaboana mba hanaovana fizahàna, nefa fantany taty aoriana fa namadika azy ny ray aman-dreniny. Raha ny marina, ny fianakaviany no nandefa ny ankamaroan'ireo “marary”, izay eo anelanelan'ny 13 sy ny 30 taona, ho any nefa tsy araka ny sitrapony. Nalefa any amin'ny efitra faha 13 avokoa izy rehetra ho “fanombohana ny fanarahamaso” mandritra ny fizahàm-pahasalamana voalohany. Ao anatin'ny adin'ny roa dia voasonian'ny rehetra avokoa ireo taratasy manaiky ny fitsaboana. Nahoana ? Satria tafiditra ao anatin'io fitiliana voalohany io ny fandorana amin'ny herinaratra ! Nodorana tamin'ny herinaratra nandritra ny antsasakadiny i Teng Fei tamin'io fizahàna voalohany io ary raha mandà tsy hanao sonia taratasy izy dia mbola hahazo mnismisy kokoa indray.
Fandorana amin'ny herinaratra mandra-panaiky
Rehefa avy nanasonia ilay taratasy fanekena, dia maharitra volana efatra sy tapany ny fitsaboana. Misy fitsaboana fito amin'ny alàlan'ny fandorana amin'ny herinaratra ao anatin'ny 6 herinandro latsaka. Alohan'ny hahazoana ireo fitsaboana ao amin'ny efitra faha-13, mandritra ny fotoana fanaovana tombatombana in-droa isanandro dia tsy maintsy voakiana in-dimy ny marary. Mahazo fanakianana ireo izay tsy miara-miasa na manohitra.
Sazy sy fanambaniana
Isaky ny maraina, dia misy fivoriana mba hanerena na hanarabirabiana ampahibemaso ireo marary tsy manaiky mora foana. Olona 300 eo ho eo no mitambatra ho mpanatrika ary izany dia mampahatsiahy ny fitsaràna ampahibemaso sy ny fampijaliana ara-tsaina nandritra ny revolisiona ara-kolontsaina. Ohatra, takiana hiaiky ny fahadisoany ny marary sady handaza ampahibemaso ny an'ny hafa, tsy maintsy miondrika eo amin'ny ray aman-dreniny ny ankizy ho mariky ny fankatoavana. Indrisy, resy lahatra amin'ny fahombiazan'ny fitsaboana tahaka izany ireo ray aman-dreny.
Isaky ny maraina, tsy maintsy manatrika ireny famoriambahoaka sy ny fizahana-fampisehoana ireny ireo marary, fanazarantena ara-miaramila ny folakandro ary tsy maintsy miaiky heloka ampahibemaso ny hariva. Tsy maintsy mihinana fanafody fampitoniana ihany koa ry zareo.
Nanandrana nandositra i Teng Fei iray volana sy tapany taorian'io fitsaboana noterena io. Saingy tsy nanaiky ny ray aman-dreniny, dia tsy maintsy niverina tany amin'ny toby izy. Ny alina, niaritra fandorana amin'ny herinaratra antsasakadiny izy ary tsy maintsy niankohoka amin'ny fomba tibetàna ( mitehaka amin'ny tany daholo ny vatana rehetra) in-2 ka hatramin'ny 300 mandra-pisasakalina mialoha ny hahazoany alàlana hatory. Soa ihany fa tonga saina ny rainy nony farany ka namoaka azy tao amin'ilay toeram-pitsaboana satria diso fandray fanapahankevitra. Tsy maintsy nandoa 5.000 yuan ihany anefa izy noho ny nanapahana mialoha ny fifanarahana ary 15.000 yuan ho sandan'ireo 6 volana nidirana hopitaly. Mahatratra 30.000 yuan ny fitsaboana feno ( efatra volana sy tapany).
ora 6 eo amin'ny aterineto dia mahatonga anao ho mpiankindoha
Araka ny tatitra momba ny fizahàna psikiatrika nivoaka tamin'ny novambra 2008 tany Pékin, dia azo heverina ho mpiankindoha izay olona rehetra rehetra mijery aterineto mihoatra ny 6 ora isanandro. Isan'ny iray amin'ireo foibe shinoa misahana manokana ny fitsaboana ny fiankonandoha amin'ny aterineto ny Lin Yi, iray amin'ireo toeram-pitsaboana tato anatin'ny taona vitsivitsy misahana manokana ny fitsaboana ireo miankindoha amin'ny aterineto. Hatramin'izao, ny haino aman-jery – izay fehezin'ny governemanta – no tena mankasitraka ireo fitsaboana tsy araka ny maha-olona ireo. Fa ireo mpitoraka bilaogy kosa dia mivoy ny fanadihadiana nataon'ny Guo amin'ny tranonkalany no sady manaparitaka ny rohy amin'ny Twitter sy ireo tranonkala sosialy hafa.